Alchemy Dungeon bụ ihe mgbagwoju anya mbụ roguelike na ya Gam akporosis
Alchemy Dungeon bụ n'ezie otu n'ime ihe mgbagwoju anya-roguelike nke izu ndị ikpeazụ a anyị gafeworo. Karịsịa maka egwuregwu ndị na-atọ ụtọ nke na-akpọ anyị òkù ka anyị jikọta ihe dị iche iche anyị nwere na bọọdụ egwuregwu.
Un abanye ebe ọzọ na-achọta ite, ngwa agha na mkpụrụ ego ọla edoE nwekwara ndị iro dị iche iche anyị ga-eche ihu, ma anyị ji ngwa ọgụ ma ọ bụ jiri aka anyị. A roguelike nke anyị ga-elebara anya iji ghọta ya ka anyị ghara ịga ọzọ. Ka anyị mee ya na mbụ roguelike puzzle game for Android.
1 Ndị na-arụ ọrụ egwuregwu
2 Alchemy Dungeon, ihe omimi nke mgbagwoju anya
3 Egwuregwu dị mfe, mana o siri ike nnabata
Ndị na-arụ ọrụ egwuregwu
Alchemy Dungeon bụ roguelike nke dị na Spanish na nke anyi nwere oke nkpuru nke ndu nke ayi g’eji lebara ya anya nke oma. Na bọọdụ anyị nwere ntanetị 5 × 6 nke a na-etinye ndị iro, ngwa ọgụ, ite na mkpụrụ ego.
Ntinye aka na ndi iro ndu nke agha nke okpukpu ga-ewepu ma ọ bụ goblin. Ọ bụrụ na anyị pịa ngwá agha ọ bụla a na-ekesa na bọọdụ ahụ, ọ ga-abụ nke anyị ma anyị nwere ike iji ya na onye iro wepu isi ihe ndị dị ndụ dịka isi mwakpo nke mma ma ọ bụ mma agha.
Nke a bụ otu akụkụ bụ isi nke egwuregwu nke Alchemy Dungeon, mana enwere ọtụtụ ihe. Taịl ahụ o enwere ike ịpịgharịa mkpụrụ ndụ nke grid ahụ na ụda olu awọ nke mere na onye iro, ngwá agha, ite ma ọ bụ ego na-enweghị usoro, n'ihi ya, anyị nwere ike igwu egwu ruo mgbe anyị ga-apụ na isi ndụ.
Alchemy Dungeon, ihe omimi nke mgbagwoju anya
Ugbu a kedụ ebe egwuregwu na-abata otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa bụ usoro nri. Oge ọ bụla anyị kpochapụrụ onye iro, kọlụm ga-agbada ala na-ebugharị ihe niile dị na ya, yabụ ọ bụrụ na anyị edebe, dịka ọmụmaatụ, daggers abụọ yiri nke ahụ, anyị nwere ike ikpokọta ha iji chọpụta usoro ọhụụ ọhụrụ.
Ọ dịkwa na usoro isi nri ebe anyị na-ahụ ihe ọzọ dị mkpa nke egwuregwu Alchemy Dungeon. Site na isi ihuenyo anyị nwere ike ịnweta usoro nri niile anyị nwere ike imeghe na mkpụrụ ego, ma ọ bụ ọbụlagodi ule anyị onwe anyị mgbe anyị na-anwa ijikọta ihe dị iche iche dịka ngwa agha, ite ọgwụ, na ndị ọzọ.
Nke a na-enye gị a nnukwu omimi na mbido ka anyị nwee ike ịhazi mmegharị anyị nke ọma, dịka anyị kwesịrị ịma mgbe anyị ga-awakpo ndị iro na-abawanye ikike mmebi ha ka anyị wee lekwasị anya na ndị kachasị ike na-ahapụ oghere efu na anyị nwere ike ịpị taịlị iji mepụta ihe ọhụrụ na-enyere anyị aka ma ọ bụ na-eme ka ihe sie ike.
Egwuregwu dị mfe, mana o siri ike nnabata
Ma nke ahụ bụ ihe ndị dị egwu nke Alchemy Dungeon, ihe mgbagwoju anya roguelike nke nwere otutu ihe di mfe nke nwere ike ịbụ na mbido, mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ịga n'ihu ma chọpụtakwuo usoro nri, tinyekwuo ndụ ndụ na ndị isi anyị ma ọ bụ ndị dike ọhụrụ ahụ anyị meghere. Egwuregwu yana ọtụtụ ọdịnaya na nke ahụ ga-eme ka anyị kpọọ ya ruo izu.
Na pixel art o nwekwara ya na Ọ na-ese nnọọ mma n'anya na nke na-aga na-arụzi ụgbọala nke egwuregwu. Ya mere, anyị na-ahụkwa ahụmịhe ọhụụ karịa nke ziri ezi iji mee ka ọ bụrụ egwuregwu egwuregwu egwuregwu egwuregwu kachasị amasị anyị.
Alchemy Dungeon dị n'efu na Storelọ Ahịa Play anyị na-agba gị ume ka ị nwaa ya nwa oge, ebe ọ na-adịghị ezo karịa ka ọ na-egosi na anya mbụ.
Ọ na-amasị gị ka ị na-egwu ya karịa ma ghọta ihe ndị na-arụ ọrụ na usoro nri, ndị iro dị egwu na roguelike ịchọrọ.
Ezi ntụziaka iji chọpụta
Ihe a na-atụghị anya ya na egwuregwu ọ bụla
Na-ebuli isi ihe nke ndụ anyị iji mara onye anyị ga-awakpo na mgbe
Ọ na-eri ahụ mgbe ị ghọtara isi ihe
Ihe nkuzi doro anya ga-adị mma
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Chọpụta ntụziaka ọhụrụ ma chọpụta ụlọ mkpọrọ dị na Alchemy Dungeon puzzle roguelike